Muuri News Network » Warbixin: Eric Bailly Oo U Qalma Lacagtii Laga Soo Bixiyay, Rooney Oo U Baahan Kursiga Keydka & Afar Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Caawa Man United Ka Badisay Hull City.
Warbixin: Eric Bailly Oo U Qalma Lacagtii Laga Soo Bixiyay, Rooney Oo U Baahan Kursiga Keydka & Afar Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii Ay Caawa Man United Ka Badisay Hull City.
Manchester United ayaa waqtigii dhimashada ciyaarta guul ka gaartay kooxda Hull City waana guushii seddexaad ee seddex kulan oo la ciyaaray xilli ciyaareedka horyaalka Premier League, Marcus Rashford oo bedel ku soo galay ayaana United u dhaliyay goolka guusha.
Jariirada Daily Mirror ayaa qortay afar waxyaabood oo laga bartay kulankii caawa ay Manchester United ka badisay kooxda Hull City oo ay ka mid tahay qaab ciyaareedka Eric Bailly iyo Rooney ay tahay in keyd la geliyo inkastoo uu caawa keenay goolkii guusha ee Red Devils.
1. Curtis Davies oo mar kale oo wacdarro dhigay.
Haatan uu yahay 31 sanno jir, Curtis Davies ayaa dareemaya inuu muddo dheer soo joogay, waxaana in muddo ah uu isku bedbedelayay kooxaha yaryar ee England.
Waxaa magaciisa lala xiriiriyay in looga soo yeerayo xulka qaranka England hadda ka hor laakiin taasi ma aysan dhicin marka laga reebo seddex kulan uu u ciyaaray xulka da’dooda ka yar tahay 21 sanno jirada sannadii 2007.
Haddii uu sidaan u sii ciyaaro waxaa laga yaabaa inuu wicitaan ka helo tababaraha cusub ee xulka Ingariiska Sam Allardyce kaasoo isku dayaya inuu wax weyn ka bedelo xulka ku fashilmay Euro 2016.
3 Zlatan Ibrahimovic waa loo sameeyay Premier League.
Marnaba shaki ha gelinin Zlatan. Isagoo 34 sanno jir ah dadka wax dhaleeceeyay waxa ay oranayeen inuusan laheyn lugo uu ku xamilo kubada degdegsiimada badan ee Premier League laakiin waa ay qaldanaayeen.
Ciyaarba ciyaarta ku xigta waxa uu cadeynayaa inuu yahay xiddig weyn oo meel walba la qabsan kara. Waa sax gool kama dhalinin Hull City laakiin dagaalka jir ahaaneed ee uu galay iyadoo roob uu ka da’ayo KCOM Stadium ayaa u aheyd tijaabo rasmi ah.
Curtis Davies iyo Harry Maguire ayaa isku dayay intii karaankooda ah inay rafaadiyaan xiddiga reer Sweden laakiin intuu iska jafay taatikadooda dagaalka ah ayuu hogaamiyay weerarka United.
4 Eric Bailly 30 milyan ginni oo si wacan loo qarashgareeyay.
Daafaca dhexe ee Manchester United ayaa u muuqday mid waligiisba ka ciyaarayay wadnaha daafaca United. Waa ku raaxeystaa kubada, waxba uma arko kubada xooga ku dhisan ee Premier League, waxaana uu u muuqdaa mid kalsooni leh isagoo halis walba u babac dhiga.
Xiddigaha yimid Old Trafford xagaagan ninka hadal-heyntiisa ay hoos gashay waa isaga laakiin waxaa laga yabaa inuu noqdo saxiixii ugu fiicnaa ee ay United sameysay xagaagan.
Weeraryahanada Hull waa ay heli waayeen caawa oo dhan meel ay ku neefsadaan.
4 Mourinho wuxuu u baahan yahay inuu Wayne Rooney keyd geliyo.
Waa kabtanka iyo hogaamiyaha kooxda, laakiin qaab ciyaareed fiican kuma jiro waxaana uu dib u dhigayaa United.
Weerarka United ayaa mar walba ahaa mid hoos u dhacayay mar kasta uu kubada heysto. Waqtiga ayaa ka daba imaanaya xiddigii hore ee Everton.
Mourinho 20 daqiiqo ayuu ciyaarsiiyay Rashford, waxaana uu dhaliyay goolka guusha, waa sax Rooney ayaa goolka dhigay laakiin ciyaar wanaagiisa kuma imaanin ee difaacasho xumo ayaa u sabab aheyd. Mourinho wuxuu u baahan yahay inuu maareyso waqtiga ciyaarta ee Rooney oo uu Rashford ku soo bilaabo.
Maxay kula tahay qodobada ay daabacday Daily Mirror? Aragtidaada inoo sheeg.